Wuxuu Dhalin Karaa Saddexley, Wuxuu Samayn Karaa Saddexley Caawin Ah, Inta Uu Barca Joogana Wuxuu Kula Guuleysan Karaa Koobab Badan Oo Champions League | Laacibnet.net
Wuxuu Dhalin Karaa Saddexley, Wuxuu Samayn Karaa Saddexley Caawin Ah, Inta Uu Barca Joogana Wuxuu Kula Guuleysan Karaa Koobab Badan Oo Champions League
Xiddigii hore ee Barcelona ee Andres Iniesta ayaa waxa uu rumaysan yahay in Lionel Messi uu yahay ciyaartoyga wali dunida ugu wanaagsan, koobab badan oo kale oo Champions League ahna uu kula guuleysan doono kooxdiisa sannadaha soo socda.
Messi oo ay da’diisu tahay 32 jir, ayaa waxa marar badan la barbar-dhigaa Cristiano Ronaldo oo ay kusoo xafiiltamayeen garoomada dhexdooda, laakiin Iniesta waxa uu tilmaamay in aanay jirin cid haba yaraatee la barbar-dhigi karayo xiddiga reer Argentine oo uu samayn karayo waxyaabo aanay ciyaaryahannada kale samayn karin.
Andres Iniesta oo u ciyaara kooxda Vissel Kobe ee ka dhisan waddanka Japan, waxa uu yidhi: “Si walba ayuu isbeddel u sameeyaa. Wuxuu awood u leeyahay inuu saddexley dhaliyo, sameeyo saddexlay caawin ah, haddii ay fiican tahay markaad dusha sare ee gaoronka daawanayso, waxa kasii fiican marka aad ku dhow dahay.
“Aniga ahaan, waa ciyaartoyga koowaad, sababtoo ah, wuxuu samayn karaa isbeddel waqti kasta inkasta oo aanu noqon karaynin kooxda oo dhan.”
Messi oo kasoo baxay kooxda da’yarta Barcelona, waxa uu naadiga koowaad usoo dallacay sannadkii 2004, waxaanu illaa markaas kula guuleystay afar Champions League, toban horyaal oo LaLiga ah iyo koobab badan oo kale oo maxalli ah iyo caalami ahba.
Andres Iniesta oo 36 jir ah, waxa uu ku arkaa in guulaha uu Messi ku hoggaaminayo Barcelona aanay dhoweyn oo ay sii socon doonaan, gaar ahaan tartanka Champions League, waxaanu yidhi: “Inta ay Barcelona haysato Leo, Barcelona waxa hubaal ah inay awoodi doonto inay ku guuleysato koobab badan oo Champions League ah.
“Kubadda cagta ayaa sidan ah; waxaad la ciyaaraysaa kooxo adag oo haysta ciyaartoy hibo leh.”